In Hospital – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အတ္တကျော်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော်က ဧကဒဿမမြောက်လက်ရာ...
အသည်းအသန်ဖြစ်နေတဲ့ လူမမာနှစ်ယောက်ဟာ ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ တစ်ခန်းတည်း သွားကျနေတယ်။
လူမမာတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ခွင့်ရတယ်။ ဒါမှလည်း သူ့အဆုတ်ထဲက အရည်တွေကို စစ်သလို ဖြစ်မှာကိုး။ အဲသလို ထထိုင်ခွင့် ရတဲ့သူရဲ့ခုတင်က အဲဒီ့အခန်းလေးရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက် ဘေးမှာ ရှိနေပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ခမျာမှာတော့ တစ်ချိန်လုံး ကျောခင်းနေရတဲ့ အနေအထားပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမမာနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အဖော်လုပ်နေကြရတယ်။ ဇနီးမယား သမီးသားတွေအကြောင်း၊ အိမ်အကြောင်း၊ အလုပ် အကြောင်း၊ တောအကြောင်း တောင်အကြောင်း ရောက်တတ်ရာရာ ပြောရင်းနဲ့ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ သူတို့ရဲ့ နေ့တာများကို ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။
အဲသလိုနဲ့ နေ့ခင်းချိန်ခါကို ရောက်လို့ ပြတင်းပေါက်ဘေး ခုတင်ပေါ်က လူမမာ ထထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ သူဟာ ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာကို ပြတင်းက တစ်ဆင့် သူမြင်ရသမျှကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လဲနေရှာတဲ့ လူမမာခမျာမှာလည်း အဲတော့မှပဲ အပြင်လောကကြီးရဲ့အရောင်တွေ၊ အရိပ်တွေကို နားနဲ့ ခံစားရင်း အသက် ဆက်နေနိုင်တော့တယ်။
ပြတင်းပေါက်က လှမ်းမြင်နေရတာကတော့ သာယာတဲ့ ရေကန်လေးနဲ့ ပန်းခြံလေး တစ်ခုပါပဲ။ ဘဲတွေ၊ ငန်းတွေဟာ ရေကူး မြူးတူးနေကြသလို ကလေးငယ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ စက္ကူလှေလေးတွေကို ကန်ထဲမှာ လွှတ်နေကြတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကတော့ လက်ချင်းချိတ်လို့၊ ရောင်စုံပန်းခြံ ကြီးထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေတာကိုလည်း တွေ့နိုင်တယ်။ ဟိုးအဝေးဆီမှာတော့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပါ။
ပြတင်းဘေးက လူမမာဟာ သူမြင်ရသမျှကို အဲသလို အသေးစိတ် ပြောပြတတ်သလို ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာကလည်း ပြောသမျှကို မျက်စိစုံမှိတ် နားထောင်ရင်း စိတ်ကူးထဲမှာ အပြင်ဘက်က ကမ္ဘာလေးကို ပုံဖော် ကြည့်နေတတ်တယ်။
တစ်နေ့ခင်းမှာတော့ ပြတင်းနားကလူက သူမြင်ရတဲ့ ရှင်လောင်းပွဲတစ်ပွဲကို ပြောပြပြန်ပါတယ်။ ရှင်လောင်းလှည့်တဲ့အခါ ကြားရမြဲဖြစ်တဲ့ ဆိုင်းသံတွေကို မကြားရပေမယ့် ပြတင်းနားက လူရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အပြောအဆိုကြောင့် ပက်လက်လဲနေသူရဲ့စိတ်အာရုံမှာ ရှင်လောင်းလှည့်နေတာကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲ။
အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ စိတ်ရိုင်းက ပက်လက်လဲနေသူရဲ့ ရင်ထဲကို ဖျတ်ခနဲ ဝင်လာတယ်။ လူမမာချင်းအတူတူ၊ သူကျတော့ အပြင်ကို မြင်ခွင့်ရနေပြီး ကိုယ့်ကျမှ အကန်း တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါလားလို့ တွေးမိလာတာပါ။ ပထမတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် တော်တော် ရှက်သွားတယ်။ သည်လို တွေးမိစရာလား၊ မနာလိုစိတ် ပေါ်စရာလားပေါ့။
ဒါပေမယ့် ရက်တွေကြာလာပြီး မမြင်လိုက်ရတာတွေက များလာတဲ့ အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်ဟာ မစ္ဆရိယစိတ်အဖြစ်ကို အလိုလို ပြောင်းလဲသွားပြီး ခါးသီးလာတော့တယ်။ အဲဒီ့ခံစားချက်က ဘယ်လောက်တောင် ပြင်းလာသလဲဆိုရင် သူကတော့ မြင်ခွင့်ရနေပြီး၊ ကိုယ့်ကျမှ အခြေအနေ မပေးလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေးက သူ့ကို တစ်ချိန်လုံး နှိပ်စက်နေ တော့တယ်။ ညဆို အိပ်လို့တောင် မပျော်တော့ဘူး။
ပက်လက်လဲနေသူဟာ ပြတင်းဘေးက ခုတင်ကို လိုချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ လုံးချာလိုက်လာပြီ။ သူ့ဘဝမှာ ပြတင်းဘေးက ခုတင်လောက် မက်မောစရာ ကောင်းတာ မရှိတော့သလိုကြီးကို ဖြစ်လာတယ်။
တစ်ညမှာတော့ ပက်လက်လဲနေတဲ့သူဟာ မျက်နှာကြက်ကို မမှိတ်မသုန်ကြည့်ရင်းနဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ညကို ဖြတ်သန်းနေချိန်မှာပဲ တစ်ဖက် ခုတင်က လူဟာ ချောင်းတွေ တအား ဆိုးလာတော့တယ်။ သူ့အဆုတ်က အတော် ဒုက္ခပေးနေတာမို့ ချောင်းအဆိုးလိုက်မှာ အဆုတ်ထဲက အရည်တွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေတယ်။
တစ်ဖက်ခုတင်က ပက်လက်လဲနေသူဟာ သူ့အခန်းဖော်ကို အသာလေး ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ချောင်းဆိုးရင်း အသက်ရှူတွေ တအားကြပ်နေတဲ့ ပြတင်းဘေးက လူမမာဟာ အရေးပေါ် လူခေါ်ခေါင်းလောင်းဆီကို လက်လှမ်းနေတာလည်း တွေ့နေရတယ်။ ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာဟာ တစ်ဖက်ခုတင်က လူရဲ့ ချောင်းသံ၊ မောဟိုက်သံတွေကို နာခံရင်းနဲ့ပဲ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တယ်။ အမှန်ဆို သူ့ခုတင်ဘေးက အရေးပေါ် လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်း ခလုတ်ကလေးကို လှမ်းနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သူနြာုပတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မီရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ မလုပ်မိဘူး။
ပြတင်းနားက လူဆီက ချောင်းဆိုးသံလည်း မကြားရတော့ဘူး။ မောဟိုက်သံလည်း မကြားရတော့ဘူး။ တစ်ခန်းလုံးဟာ ဘာသံမှ မကြားရတော့အောင်ကို တစပြင်လို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။
နောက်တစ်ရက် မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ တာဝန်ကျ သူနာပြုဟာ အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပြတင်းပေါက်နားက လူမမာရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူနာပြုဟာ သက်ဆိုင်ရာကို ခေါ်ယူပြီး အလောင်းကို အခန်းထဲက ထုတ်သွားဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်။
အားလုံး နေသားကျသွားပြီး အခန်းထဲမှာလည်း တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ရော ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာဟာ တာဝန်ကျသူနြာုပကို တောင်းပန်ပါတော့တယ်။ ဟိုလူ မရှိတော့တဲ့နောက် ပြတင်းဘေးက ခုတင်ပေါ် သူ့ကို ပြောင်းပေးဖို့ပေါ့။
သူနာပြုဆရာမကလည်း သဘောမနောကောင်းစွာပဲ၊ ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာကို ပြတင်းနားက ခုတင်ပေါ်ကို သေချာဂရုစိုက်ပြီး ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လူမမာ နေသားတကျနဲ့ သက်သက်သာသာ ရှိတဲ့အထိ သူကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်ပြီး ပြောင်းပေးလိုက်တာပါ။
အားလုံးနေရာကျပြီဆိုမှ သူနာပြုဆရာမလည်း ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ အခန်းထဲမှာတော့ လူမမာတစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်တော့တယ်။
သည်အခါမှာတော့ ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာဟာ တံတောင်ဆစ်ကို အားပြုလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းအားယူပြီး ကိုယ်တစ်ပိုင်း ကြွလိုက်ပါတယ်။ ပက်လက်လဲနေတဲ့ လူမမာ တစ်ယောက်အဖို့ အဲသလို ကိုယ်တစ်ပိုင်းလေး ကြွရတာ သက်တော့ မသက်သာလှပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနာခံပြီး ထနိုင်သလောက် ထလိုက်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ဘက်လောကကို ကြည့်ချင်လှပြီလေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အပြင်လောကကြီးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်လား။
ကိုယ်လည်းသေချာကြွသွားရော ပြတင်းကနေ အပြင်ဘက်ကို အလော သုံးဆယ် လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
မြင်လိုက်ရတာက ဘာဆိုဘာမှ မရှိတဲ့ ဆေးရုံနံရံကြီးပါ။
သွားလေသူကြီးက ပြောတော့ ရေကန်သာယာနဲ့ ပန်းခြံလှပဆို။
ဒါနဲ့ ပက်လက်လဲနေသူဟာလည်း စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ခုတင်ပေါ် ပြန်လှဲရင်း ဟိုလူ ဘာကြောင့် သူ့ကို အဲသလိုတွေ ပြောသွားတာလဲဆိုတာ တနုံ့နုံ့တွေးနေမိတယ်။
မနေနိုင်တော့ပြန်တဲ့အဆုံးမှာတော့ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူ့ကို ဆေးတိုက်ဖို့ ဝင်လာတဲ့ သူနာပြုဆရာမကို မေးမိတယ်။ သေသွားတဲ့ ကိုယ့်အခန်းဖော်က ပြတင်းပေါက်က ကြည့်ပြီး ဘာလို့ လုပ်ဇာတ်တွေ ခင်းသွားတာလဲဗျာပေါ့။
သွားလေသူဟာ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြတင်းပေါက် ကကြည့်ရင် ဆေးရုံတံတိုင်းကိုတောင်မှ မမြင်နိုင်ရှာပါဘူးတဲ့။
“အင်း… သူက ရှင့်ကို အားပေးချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ အဲသလို ပြောပြသွားတာ နေမှာပေါ့ရှင်…”တဲ့။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ သည်ပုံပြင်ကို နှစ်သက်သလို အနက်ဖွင့် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်အခြေအနေက ဘယ်လောက် ဆိုးနေနေ တစ်ဖက်သားကို စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးရင် ကိုယ်လည်း အများကြီး စိတ်ချမ်းသာနိုင်တယ် ဆိုတာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကြေကွဲမှု၊ ပူဆွေးမှုကို တစ်ဖက်သားနဲ့ မျှဝေခံစားလိုက်မယ်ဆိုရင် နှစ်ဆတိုးပြီး ပျော်နိုင်ပါတယ်။ လောကမှာ ချမ်းချမ်းသာသာ နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေနဲ့ ချိန်စက်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့အရာတွေ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာကို နေ့စဉ် ပိုင်းခြား ရေတွက်နေသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ထုတ်ဝေဖို့အတွက် စာပြန်စစ်တာ၊ စာမျက်နှာ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ ပြန်ပြင်တာကို စာရေးသူ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်တာပါ။
သည် “ဆေးရုံမှာ”ကို အရောက်မှာတော့ သည်အပုဒ်ရဲ့အဆုံးမှာ နောက်က ကျွန်တော် ဝင်ပြောထားတဲ့စကားကို ဘဝင်မကျမိတော့ဘူး။ ငါးနှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ပြောင်းသွားတာလားတော့ မသိဘူး။
ဟိုမျက်မမြင် စေတနာရှင်ဟာ နှုတ်ကြောင့် သေရတာ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းက စာမူကို ပြန်စစ်နေချိန်မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် “စေတနာသည် လူတိုင်းနှင့် မတန်”ဆိုတဲ့စကားက သွေးထွက်အောင် မှန်နေတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ တွေးမိရပြန်တယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ပက်လက်လဲနေတဲ့ဘဝကို ရောက်နေပေမယ့် အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကိုယ်တွင်းမှာ အောင်းနေသေးတာ၊ အဲသလို စိတ်ရိုင်း စိတ်ယုတ်တွေ ကျွန်တော့်မှာလည်း အခါခပ်သိမ်းမဟုတ်တောင် ရုတ်ခနဲ ရုတ်ခနဲ လစ်ရင် လစ်သလို ပေါ်လာတတ်သေးတာများကို ဆက်လက် ဆင်ခြင်မိရပြန်တဲ့ အခါမှာတော့ သည်ပုံပြင်လေးကို ပြန်ဖတ်မိသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်မိသွားရပြန်တယ်။
စိတ်ရိုင်းတွေ ပေါ်လာတိုင်း ပြန်ဖတ်ဖို့တော့ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ သည်ပုံပြင်လေးကို စာရင်းတို့လိုက်မိရပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခွဲ ကျွန်တော် သည်ပုံပြင်ကို ရေးခဲ့စဉ်က စကားအတိုင်းပဲ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်း အနေနဲ့တော့ သည်ပုံပြင်ကို နှစ်သက်သလို အနက်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တွေးမိတာလေးတွေသာ ဖြည့်ပြောလိုက်တာပါ။ စာဖတ်သူလူကြီးမင်းရဲ့အတွေးကိုတော့ ကျွန်တော် ဝင်စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့် မရှိတာ အသေအချာပဲ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ။
[အတ္တကျော်ရဲ့ “နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င် ရွှင်လန်းတဲ့စိတ်” (ဒုတိယအကြိမ်) စာ ၅၉-၆၅ မှ]
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လရဲ့ နောက်ဆုံးပတ်မှာ သည်တစ်ပုဒ် အလင်းတန်းဂျာနယ်ထဲ ပါလာတော့ စာဖတ်သူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်။ သည်တစ်ပုဒ်ဟာ ဆရာ ဖေမြင့်ရဲ့ “နှလုံးသား အာဟာရ”ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဆရာဖေမြင့် ရေးခဲ့ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ ပင်ကိုရေး ၀တ္ထုတို/ရှည်နဲ့ လူနာဆောင် အမှတ် ၆ လို ဘာသာပြန်စာအုပ်များကို ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က တရှိုက်မက်မက် ဖတ်ဖူးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာတွေကို အဖတ်များသွားပြီး ဘာသာပြန်တွေကို လုံးလုံးမဖတ်မိတော့တာမို့ ဆရာဖေမြင့် စာတွေကို မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး။ အဲတော့ ကျွန်တော် မသိလိုက်ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်က ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော့်ဆီ ဖှစ်လစ်ပီနို မိတ်ဆွေအမျိုးသမီး မာလင်(န်) ပါရာ့(စ်) ပို့ပေးတဲ့ ဓာတ်ချောစာကို ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ အဲဒီ့ စာဖတ်သူက ရေရေရာရာ ပြောပြတော့မှ ဒါတွေက Chicken Soup for the Soul ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ စာတွေမှန်း ပထမဆုံးအကြိမ် သိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အထိလည်း အဲဒီ့ ကြက်စွပ်ပြုတ် စာအုပ်တွေကို မြင်ကို မမြင်ဖူးသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မောဟပြေ ပုံတိုပတ်စများ ဒုတိယတွဲဖြစ်တဲ့ “ဘ၀တူရိယာ” ထွက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှသာ ကြက်စွပ်ပြုတ် စာအုပ်တွေက မိတ်ဆွေသစ်တစ်ဦးရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ သူ့အလိုလို အိမ်ပေါ်ရောက်ချလာတာမို့ စ ဖတ်ဖူးသွားတာပါပဲ။
ထားပါတော့ဗျာ… ကျွန်တော့်ကို ချစ်ချင်တဲ့ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကတော့ ကျွန်တော်ရေးတာကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော့်ကို ချီးကျူးပါတယ်။ ရှင်လောင်းပွဲကို ထည့်ရေးထားတာလေးကို ကြံဖန် ချီးကျူးတာပါ။ စာရဲ့ ရုပ်လုံးပိုကြွသွားပြီး မြန်မာဆန်သွားအောင် မူရင်းမှာ မပါတဲ့ အကွက်လေးကို တမင်ကလာ ဖြည့်စွက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ပုံတို ပတ်စတွေကို ဘာသာပြန်စဉ် တစ်လျှောက်လုံးမှာရော၊ တခြား ကျွန်တော့် ဘာသာပြန်လက်ရာတွေမှာပါ မြန်မာ့နားထဲ လျှောခနဲ ၀င်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အားထုတ်မိနေတာချည်းပါပဲ။ ကျွန်တော့် ရောဂါလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့ ခင်ဗျာ။
Author lettwebawPosted on 10 August 2012 Categories Reproduction, Translation, Uplifiting
One thought on “In Hospital”
11 August 2012 at 12:45 am
I have read many variations of that story. Beautiful!
LeaveaReply to Sint Cancel reply
Previous Previous post: Enjoying Responsibly
Next Next post: Shots in the Arm
ငလျင်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ - ၁
Excerpts from ATK's Newly Published Book
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ - ၄
Sound Files Added